सिडीयो साब,रुपन्देहीमा मात्र किन निषेधाज्ञा ?-Nagarikaawaj.com
सिडीयो साब,रुपन्देहीमा मात्र किन निषेधाज्ञा ?
माेर्चाकाे अान्दाेलन राेक्ने उपर्युक्त बिधि निशेधाज्ञा मात्रै हाे र ?
पश्चिम नेपालको रुपन्देही जिल्ला शान्त छ । भैरहवा घटना भएकाे अाज [माघ ३,२०७२ ]ठ्याक्कै ५ महिना पुगेकाे छ । यतिबेला कुनै मोर्चाको कार्यक्रम पनि छैन र सभा जुलुस पनि ।
तर रुपन्देहीमा गत भदाैदेखि निषेधाज्ञा लम्बिएको लम्बियै छ । अहिलेसम्म तीसौंपटक निषेधाज्ञा लगाएको सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकालेको छ ।
यतिबेला मुलुकका ७४ जिल्लामा भने निशेधाज्ञा छैन । मात्र रुपन्देहीमा किन यस्तो भैरहेको होला भन्ने प्रश्नआम नागरिकले उठाउन थालेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद ढकालको नजरमा रुपन्देही अशान्त र जोखिमयुक्त छ ।
तराइको आन्दोलन र नाकाबन्दी अनि भारतसंग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले पनि रुपन्देही अन्य जिल्लाको तुलनामा बढि जोखिमयुक्त छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन् —‘अरुमा भन्दा हाम्रो जिल्लामा बढि जोखिम छ ।’ त्यसले लम्बिरहेको छ निशेधाज्ञा उनले भने ।
उनले बेलहिया नाका सुचारु गर्न,बिमानस्थललाइ निरन्तर संचालन गर्न र भैरहवामा जनजीवन सामान्य बनाउनका लागि प्रशासनले निशेधाज्ञा गरिरहनुपरेको नागरिक आवाजसंगको कुराकानीमा बताए ।
जिल्लाका प्रमुख ढकालले अरु कुनै उपलब्धिपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् । उनकाे दैनिकी निशेधाज्ञाकाे सूचना निकाल्ने र तेल बाँड्ने सूची मिलाउदैमा बितेकाे छ ।
निशेधाज्ञा हटाउने बित्तिकै मोर्चाका कार्यकर्ता सदरमुकाममा खनिने र दैनिका कामकाज अस्तब्यस्त बन्ने डरले पनि यो अबस्था सिर्जना गरिएको बताए ।गत भदौ ३ गते बिहिबार भैरहवामा मधेशीमोर्चा र अर्काे समूहबिच झडप भएको थियो ।
झडपमा परि करिब २० जना घाइते समेत भएका थिए । झडप भएपछि ३ र ४ गते प्रशासनले कर्फू लगायो । ५ गते देखि पटकपटक गरि अहिलेसम्म निशेधाज्ञा जारी छ ।
लामो समयदेखिको तराइ मधेशको अँन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण जिल्लाको आर्थिक अबस्था दयनिय बनेको छ ।
अहिलेसम्म रुपन्देहीमा ९ जनाको ज्यान गएको छ । रुपन्देहीका प्रहरी प्रबक्ता तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक रामेश्वर कार्की नागरिक आवाजसंग भन्छन्—‘सीमानाका अबरोध नहोस् भनेर जिल्लामा निशेधाज्ञा जारि रहेको छ । ’
उनले भने—‘ निशेधाज्ञा नलगाएमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले सीमानाकामै अबरोध सिर्जना गर्छन् ,अनि आयात—निर्यात पूर्ण रुपमा प्रभाबित हुन्छ ।’
दैनिक रुपमा आबश्यक पर्ने ग्यास, तेल, नुन, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका पदार्थको रोकावट हटाउनका लागि निशेधाज्ञा लगाइएको प्रहरी प्रबक्ता कार्कीको ठहर छ ।
तर आन्दोलनकारीहरुले भने अन्य जिल्लामा नभएको जात्रा रुपन्देहीमा भैहेको बताउछन् ।
निशेधाज्ञाका कारण आफूहरुले सिमानाकामा प्रहरीको गोली खानु परेको रुपन्देहीका आन्दोलनरत मोर्चाका संयोजक महेन्द्र यादब बताउछन् ।
वाताबरण सहज बनाउन अब प्रशासनले भूमिका खेल्दै निशेधाज्ञा हटाएर जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्दछ । निशेधाज्ञा माेर्चालाई तह लगाउने उपर्युक्त बिधि हाेइन ।
नागरिक आवालजे लेखेका यी पनि समाचारहरु पनि पढ्नुस् :-
अाज ८ बजेदेखि शुक्रबार विहान ५ बजेसम्म रुपन्देहीमा कर्फ्यु
भैरहवामा तनाब,बन्दकर्ताद्वारा २ वटा सवारीमा अागजनी [फाेटाे सहित]
भैरहवामा प्रशासनकाे निशेधाज्ञा
सीमांकन पछिकाे अान्दाेलनमा नेपालमा २४ जनाले ज्यान गुमाए
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता लक्ष्मण थारु भैरहवाबाट पक्राउ
भैरहवामा जारी भएकाे निषेधाज्ञाको क्षेत्र बढ्याे
भैरहवामा छैठाैं पटक निशेधाज्ञा जारी,असाेज ३ गते बेलुकासम्म लागु हुने
भैरहवामा नाकाबन्दी, तरकारी र दूध आपूर्ति बन्द
रुपन्देही प्रशासनद्वारा सदरमुकाम भैरहवामा निषेधित क्षेत्र घोषणा